यस्तो बेला महिलालाई शा’रिरीक चाहना बढी हुन्छ ! जानी राखौ - Samachar Post Dainik
यस्तो बेला महिलालाई शा’रिरीक चाहना बढी हुन्छ ! जानी राखौ
महिलालाई सारीरीक चाहना बढी हुन्छ १ बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो महिनावा’री पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म ।
यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए । यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार महिनावा’री पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म यौ’नको मु ड बढी हुन्छ ।
त्यस अनुसार महिना’वारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए ।
यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ ।
लिं’गको आकार कत्रो भए महिलालाई शा’री’रिक यौ’न स’म्पर्क गर्दा आ’नन्द मिल्छ ? जानी राखौँ लिं’गको आकार कत्रो हुनुपर्छ रु यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिं’गको सही आकार कति हो ?
यस प्रकारको सोच प्राय सबै पुरुषको दिमागमा आइरहन्छ तर अब यसको उत्तर पनि प्राप्त भएको छ । वैज्ञानिकहरूले यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिं’गको आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा युनिभर्सिटी अफ मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरूको एक टिमले हालै एउटा सर्वेक्षण गरेका थिए, जसमा १८ देखि ६५ वर्षका ७५ जना महिला सहभागी थिए ।
ऊक्त सर्वेक्षणका त्रममा महिलाहरूलाई लिं’गका फरक–फरक साइजका कृतिम लिं’ग देखाइएको थियो । यो अनुसन्धानबाट आएको परीणाम देखेर वैज्ञानिकहरू पनि अचम्भित भएका छन् । परिणाम अनुसार यौ’न सन्तुष्टिका लागि धेरै महिलाले ६ दशमलव ३ इन्चको आकारलाई सही बताए । यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले ६ दशमलव ३ इन्चको लिं’गलाइ उपयुक्त मानेका छन् ।
कसैको लिं’गको आकार ६ दशमलव ३ वा ६ दशमलव ४ नभए पनि आत्तिनु भने पर्दैन । किनभने लिं’गको औसत आकार ५ दशमलव २ इन्च हुन्छ । उक्त अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने महिलाहरू यौ’नका लागि लिंगको आकारलाई मात्र महत्व दिँदैनन् । यद्यपि क्याजुअल सेक्सको समयमा भने उनीहरू लिं’गको आकारमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउँछन् ।
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ ।
विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ ।
यस्तै एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्ष भित्र ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ । विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो ।
विवाह पछिको परिवर्तित दैनिकी र जीवनशैलीका कारण शरिरमा थुप्रै हर्मोनल चेन्ज हुने गर्दछ । यो तौल बढाउनका लागि जिम्मेवार हुनसक्छ । यस्तै विवाह पछि व्यस्त समय तालिकाका कारण थुप्रै मानिसहरु पर्याप्त निदाउन पाउँदैनन् ।
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:२४